दीर्घ कोभिड अर्थात् कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको दीर्घ प्रभाव – Khabar PatrikaNp
दीर्घ कोभिड अर्थात् कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको दीर्घ प्रभावका कारण मानिसहरूलाई चार भिन्न समस्या पारिरहेको हुनसक्ने एउटा अध्ययनले देखाएको छ।
उनीहरूलाई थप सहयोगको खाँचो छ – अनि उपचार गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूमा पनि थप जानकारी हुन जरुरी छ।
– निरन्तर कोभिड-१९ का लक्षणहरूका समस्या
रिपोर्टका लेखक डा. इलाइन म्याक्सवेल भन्छिन् उनलाई सुरुमा गम्भीर कोभिड भएकाहरूलाई मात्र यस्तो समस्या आइपर्छ होला भन्ने लागेको थियो। साथै कोभिडका कारण ज्यान गुमाउने जोखिम कम भएका समूहमा दीर्घ प्रभावको जोखिम पनि कम होला भन्ने उनले ठानेकी थिइन्। तर अध्ययनमा त्यस्तो मात्र पाइएन।
“हामी दुवै बिरामी भएपछि हामीले इच्छापत्र पनि बनायौँ। डरलाग्दो थियो।”
अध्ययनको रिपोर्टले दीर्घ कोभिडका निम्ति निश्चित् अस्पतालका साथै समुदायमा सहयोगको आह्वान गरेको छ।
“हाम्रो उद्देश्य भनेको यो अध्ययनलाई स्वास्थ्यकर्मीहरूले उपयोग गरेर बिरामीहरूको अनुभव बुझ्न मद्दत पुगोस् भन्ने हो ताकि उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने उपचार, सेवा र सहयोगमा पहुँच मिलोस्,” डा. म्याक्सवेलले भनिन्।यो समाचार बीबीसी नेपालीबाट साभार गरिएको हो ।
Prevज्योतिष शास्त्रका अनुसार तीन राशिका व्यक्तिहरुले सुनको औंठी र गहना लगाउन हुँदैन
Nextदैवपनि कति निष्ठुरी : पोखरामा २० घण्टाको नवजात शिशुमा कोरोना संक्रमण पुष्टि
१७२ दिनपछि श्रावण २१ गते बुधबारदेखि वक्री हुँदै शनि पुनः धनुराशिमा प्रवेश ५ राशिलाई दोहोरियो शनिको साढेसाती र अढैया दशा
आज शुक्रबार लक्ष्मी माताको दर्शन गर्दै आजको दिनको सुरुवात गर्नुहोस !
सुदूरपश्चिममा ४ जना बैंकका कर्मचारीसहित थप ४४ जनामा कोरोना पुष्टि